विशेष – Page 16 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:३७ English
तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको निश्कर्ष १ श्रावण २०७७, बिहीबार २१:३९
काठमाडौँ, १ साउन । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलबाट कुनै निश्कर्ष नआएपछि नेकपामा प्रचण्ड–माधव समूहले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको विवादका विषयमा बिहीबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी..
भाडाबारे देखिएका समस्या मिलेर समाधान गर्ने घरधनी र व्यवसायीको प्रतिवद्धता १ श्रावण २०७७, बिहीबार २१:१८
काठमाडौँ, १ साउन । घरभाडाबारे ठमेल क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीबीच देखिएको असमझदारीमा दुबै पक्षले एक भएर सुल्झाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । घरधनी र व्यवसायीले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असमझदारीहरु मिलेर समाधान गर्ने दाबी गरेका हुन् । ९० देखि ९५ प्रतिशत असमझदारी..
कहिले चल्छन् लामो दूरीका सवारी साधन ? ३१ असार २०७७, बुधबार १८:१३
काठमाडौँ, ३१ असार । सरकारले जिल्लाभित्र चल्ने सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेपनि लामो दूरीका सवारीबारे भने निर्णय भएको छैन । तर लामो दूरीमा चल्ने सवारीका साधन कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे यातायात व्यववस्था विभागका निरन्छर छलफल भने भईरहेको छ । यसै बीचमा बुधबार पनि यातायात व्यवस्था..
अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको यस्तो प्रष्टिकरण ३० असार २०७७, मंगलवार १९:२३
काठडमाडौँ, ३० असार । परराष्ट्र मन्त्रालयले भगवान रामचन्द्रको जन्मस्थल अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । परराष्ट्रले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग नजोडिएको दाबी गरेको छ..
कर्णाली प्रदेशका सांसदमा कोरोना पुष्टि ३० असार २०७७, मंगलवार १६:१९
सुर्खेत, ३० असार । कर्णाली प्रदेशका एक सांसदमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सोमबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सांसदका सचिवालयका २ सदस्यको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । ती सांसदलाई अहिले आइसोलेसनमा राखिएको छ । सांसदलाई..
भगवान राम र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको भाजपाद्वारा निन्दा ३० असार २०७७, मंगलवार ०९:४६
काठमाडौँ, ३० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामचन्द्रको जन्मस्थल अयोध्या नेपालमा पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतमा ब्यापक आलोचना भएको छ । भारतीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निन्दा गरेको छ ।..
सरकारले गर्‍यो श्रष्टाहरुलाई सम्मान (नामसहित) २९ असार २०७७, सोमबार १७:१८
काठमाडौँ, २९ असार । सरकार विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री योगेश भट्टराईले श्रष्टाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार २०७६ अन्तर्गत..
पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा २ जनाको मृत्यु, ५ वेपत्ता २९ असार २०७७, सोमबार ०९:११
तनहुँ, २९ असार । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ऋषिङ गाउँपालिकामा पहिरोले पुरिएर पाँच जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । म्याग्दे गाउँपालिका–६ बेलौतेडाँडामा..
आइतबार विदेशबाट ८८४ नेपालीको उद्दार २८ असार २०७७, आईतवार १८:२७
काठमाडौँ, २८ असार । आइतबार विदेशबाट ८८४ नेपालीको उद्दार गरिएको छ । ३ वटा विमान कम्पनीका ६ उडानमार्फत ८८४ जना नेपालीको उद्दार गरिएको हो । आज अन्तराष्ट्रिय उडानर्फत आएका ६ जहाजमध्ये हिमालय एयरका ३, नेपाल एयरलाइन्सका २ र फ्लाई दुबईको एउटा उडान भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले बहराइनबाट १४४..
वर्षाले तराईको जनजीवन प्रभावितः सर्लाही र सप्तरीमा डेढ सय परिवार विस्थापित २८ असार २०७७, आईतवार १४:०८
सर्लाही, २८ असार । वर्षाका कारण आएको बाढीले सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाका २७ घर डुबानमा परेको छ । पाँच घर भत्केर क्षतिग्रस्त हुँदा उनीहरु छिमेकीको शरणमा छन् । मलगंवा ५ स्थित लखनदेही खोलाको बाढी भाडसर गाउँमा पस्दा २७ घर डुबानमा परेका हुन् । घर डुबानमा परेपछि १ सय ४७ जना विस्थापित भएका..
विदेशबाट हुँदै आएको उद्दार उडान २ दिनलाई स्थगित २८ असार २०७७, आईतवार ११:०७
काठमाडौँ, २८ असार । कोरोनाका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र नेपालीको उद्दार गर्न हुँदै आएको चार्टड उडान सोमबार र मंगलबार भने नहुने भएको छ । जेठ २३ गतेबाट नियमित जस्तै हुँदै आएको उद्दार उडान २ दिन स्थगित हुने भएको हो । विमानस्थल र होल्डिङ सेन्टरको सरसफाइ गनै २ दिन उडान रोक्ने निर्णय भएको..
म्याग्दीको पहिरोमा पुरिएर मर्नेको संख्या २७ पुग्यो २७ असार २०७७, शनिबार २२:४८
म्याग्दी, २७ असार । म्याग्दीको धवलागिरि, मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा शुक्रबारको पहिरामा पुरिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २७ जना पुगेको छ । प्रहरीका अनुसार बेपत्ता भएका तीनजना जीवितै सम्पर्कमा आएका छन् । चारजना अझै बेपत्ता छन् । धवलागिरि–६ मराङका १८, मालिका–७ बिमका ८ र रघुगङ्गा–६..
कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो २७ असार २०७७, शनिबार ०९:०४
काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा नलगी भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७ खरिपाटीस्थित क्वारेन्टिनमा लगिएको छ । कतार एयरवेयजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानस्थल..